१० टेक्नोलोजी ब्लगहरू तपाईंलाई यसको बारेमा थाहा थिएन Martech Zone
सोमबार, जनवरी 25, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
टेक्नोलोजी ब्लगहरू महत्त्वपूर्ण छ Martech Zone। जब म कसरी एक विशिष्ट टेक्नोलोजी मार्केटिंग लाई प्रभाव पार्दै छ भन्ने बारेमा लेख्छु, यो प्राय: टेक्नोलोजी ब्लगबाट प्रेरित हुन्छ। प्रविधिको बारेमा समाचार र विचारहरू ढाक्न उनीहरू सामान्यतया ठूलो काम गर्छन्, तर यसको व्यावहारिक मार्केटिंग अनुप्रयोगहरूमा मिस हुन्छन्।
ठूला केटाहरू सँधै सबैभन्दा ठूलो समाचार स्कूप, भर्खरको गफ, वा केहि उत्कृष्ट पोस्ट शीर्षक फ्याँक्न खोज्दछन् जसले सबैको ध्यान आकर्षण गर्छ। टेक्नोलोजीमा यति धेरै कुराहरू भइरहेको छ जुन तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ। यी व्यक्तिहरू सँधै यसको शीर्षमा हुन्छन्!
यहाँ १० टेक्नोलोजी ब्लगहरू छन् जुन तपाईंलाई थाहा थिएन:
के होईन - प्याट्रिक एक राम्रो मित्र हो र उनको कम्पनीले 'न-टेक्नियां' शिक्षित गर्दछ।
कोडिंग डरावनी - जेफसँग अनमोल सल्लाह छ र उनको लेखन सधैं हास्यपूर्ण हुन्छ।
केन म्याकगुइरे - केनले कसरी हाम्रो दैनिक जीवनमा टेक्नोलोजी परिवर्तन गर्दछ।
तर तपाईं एक केटी हुनुहुन्छ - टेक स्थानमा महिला आवाजहरूको शून्य छ। एड्रियाले भर्दैछ।
स्टार्टरटेक - यो ब्लग टेक्नोलोजी पढ्न सजिलो बनाउँदछ।
टेक्नोलोजी र मार्केटिंग कानून ब्लग - एरिकले सबै अदालतका केसहरूलाई समेट्छ जुन टेक्नोलोजिष्टहरू र मार्केटरहरूलाई एक समान प्रभाव पार्छ।
चिपको क्विप्स - लामो समय मित्र को Martech Zone, चिप जहिले पनि नेट मा केहि राम्रो समाचार क्लिप।
२ वाक्यहरू वा कम - चिपको पोष्टहरू भन्दा छोटो पनि, साथी बिल डसनले प्रविधि भन्दा अगाडि राख्नुहुन्छ र केही थोरै विवरण प्रदान गर्दछ।
मुनाफा गर्न बदाम - ब्लगको अर्को साथी, थोर श्रोक आफ्नो ब्लगमा टेक र नाफाको संयोजन गर्दछ।
सबै जोको टेक्नोलोजी ब्लग - राम्रो मित्र जेसन बीन हर जो ब्लग मा एक नियमित हो।
कहिलेकाँही ब्लगमा त्यस्तो पॉलिश लुक र अनुभव हुँदैन - तर सामग्री सँधै हुन्छ! तपाईंको फिड रिडरमा यी ब्लगहरू थप्नुहोस् र म विश्वास गर्दछु तपाईं निराश हुनुहुने छैन।
टैग: ग्राहक प्रतिधारणसामाजिक डाटा
के चाचा स्मार्ट गुगल भन्दा छ?
जनवरी 29, 2010 7:24 बजे
वाह, धन्यवाद, डग! म यस्तो अगस्ट सूचीमा समावेश हुन पाउँदा सम्मानित छु — विशेष गरी जेफ एटवुडको मनपर्नेहरूसँग।